Gîte Sous les Tilleuls - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMarie & Vincent
UMarie & Vincent yi-Superhost
I-cocoon encinci kwindawo eluhlaza ezinyaweni zemithi ye-lime engamakhulu amabini eminyaka. Ikhululekile kwaye iqaqambile, i-cottage ilungele ukubaleka ngoxolo kwezothando, kufutshane neziko kunye nedolophu endala.
Uyakonwabela ukuhlala kwakho ngoxolo kule garaji indala ihlaziyiwe yaba yindlu encinci. Ukunikezela ngazo zonke izinto ezithuthuzelayo zale mihla kunye nokukhanya okuhle kwendalo, ikwanayo nefenitshala yegadi ukonwabela iintsuku ezinelanga.
- ekhitshini elixhotyiswe: ii-hotplates ezimbini, i-microwave / i-grill, ifriji encinci, i-dishwasher kunye nomatshini wekhofi weTassimo.
Izitulo ezithathu eziphakamileyo zibekwe ecaleni komphezulu wokusebenzela, oqulethe zonke izitya. Isicwangciso somsebenzi sisenokusetyenziswa njengendawo yeofisi (i-WiFi iyafumaneka ukuze kusetyenziswe umnxeba).
- kwigumbi lokuhlala: ibhedi yesofa eguqukayo enetafile yekofu ejonge kumabonwakude.
Kwigumbi lokulala: ibhedi enkulu ye-queen ye-160x200 cm (ibhedi yatshintshwa ngoFebruwari 2021: ibhedi entsha, epholileyo kakhulu iya kukwamkela ukuze ulale ubusuku obuhle!)
I-wardrobe kunye neshelufu iya kukuvumela ukuba ugcine izinto zakho. Umatshini wokuhlamba uyafumaneka.
- kwindawo yokuhlambela: ishawa enkulu yokuhamba, iyunithi yokuhlambela kunye needrowa.
Isithili esisedolophini sisithili sembali esigcwele umtsalane.
Uyakufumana apho izindlu ezindala ezichazwe njengeeMbali zeMikhumbuzo, inqaba yeeNkosi zeCrépy, iintsalela zeSt Arnoult abbey, icawa yaseSt Denis kunye neevenkile ezininzi (indawo yokubhaka, icaterer ...) kunye neendawo zokutyela.
Umbuki zindwendwe ngu- Marie & Vincent
Nceda usinike ixesha eliqikelelweyo lokufika kwakho ukuze sibekho kwaye usazise xa kukho ukulibaziseka okukhulu.
Siyafumaneka ukuze siqinisekise ukuba ukuhlala kwakho kugudileyo kangangoko.
Ungalibazisi ukuqhagamshelana nathi ukuba kuyimfuneko!
Siyafumaneka ukuze siqinisekise ukuba ukuhlala kwakho kugudile…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Crépy-en-Valois